Maalinta: Meey 11, 2020
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu ku dhawaaqay go’aamo cusub oo laga soo saaray dagaalka lagula jiro coronavirus kadib Shirka Golaha. Madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu ka hadlay iibka shaaha wuxuuna yidhi bayaankan soo socda: Erdogan wuxuu yidhi, “2020 [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa bayaan ka soo saaray shirkii golaha wasiirada kadib. Sida lagu sheegay bayaanka, dadka da'doodu ka weyn tahay 65 sano waxay awoodi doonaan inay wadada u baxaan Axada, Meey 17, 2020 inta u dhaxaysa 11.00-17.00. Kayar 20 jir [More ...]
Xayiraadda Safarka illaa 9 Magaalooyin oo La Saaray: Madaxweyne Erdogan, oo sameeyay bayaan ku saabsan arinta ajandaha kadib Shirka Golaha, wuxuu ku dhawaaqay in xayiraadii safarka ee magaalada la qaaday. Waa kuwan gobolladii laga qaaday xayiraadii safarka. [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sameeyay bayaanno muhiim ah ka dib Golaha Wasiirada ee Madaxweynaha. "Bandowga waxaa mar kale la adeegsan doonaa May 16-17-18-19," ayuu Erdogan ku sheegay hadal uu soo saaray. Kulankii uu Erdogan kaga dhawaaqay go’aamadiisa todobaadlaha ah oo cinwaankiisu yahay Qaranka, [More ...]
Iyada oo soo socda xilliga xagaaga ka dib markii uu dillaaco ee Turkey Covidien-19 waxaa lagu sameeyey shaqada lagama maarmaanka u ah dib u soo kabashada ee waaxda dalxiiska. Marka la eego baaxadda daraasadahaan, awooda hudheellada meelaha lagu booqan karo ayaa lagu yareynayaa nus. Qolalka qoraxda ee xeebta [More ...]
Marka la eego cabirrada coronavirus-ka, xiirayaasha iyo timo-jaraha, oo howlahooda la hakiyey 21-kii Maarso, waxay bilaabeen inay shaqeeyaan ilaa maantadan. Macaamiisha la yimid furitaanka barahayaashu waxay xiirahooda hoos imaadeen xeerarka nadaafadda. 40 WAQTIGII LABAAD Laakiin adeeg [More ...]
Haddii warshadaha tareenka loo tixgeliyo dhinaca tayada tayada, waxay dejin kartaa tiro badan oo heerar iyo nidaamyo maareyn. Ballaca dalabka wuxuu leeyahay dalabyo badan oo ku saabsan warshadahaas oo dhameystiran. ISO 9001: 2015 Maareynta Tayada ee Tareenka [More ...]
Khubaradan cadeeya in walaacooda ay kordhin karto natiijada isbedelada hormoonnada ah ee ay la kulmaan haweenka uurka leh ee ku dhaca nidaamka faafa ayaa hoosta ka xariiqay in habka difaaca uu u adkeysto inta lagu gudajiro hawshan. Khubaradu waxay u daryeeleen hooyooyinka inay si taxaddar leh oo joogto ah u shaqeeyaan [More ...]
Şakir Zümre, oo ka mid ah qaraabada ugu dhow shirkadda Marshal Fevzi Çakmak, wuxuu ku dhashay Varna sanadkii 1885. Kadib markuu waxbarashadiisii ​​hoose ku dhammeystay halkan, wuxuu aaday Geneva. Halkaas ayuu ku bartay sharciga. Sidoo kale intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa baaritaano ka sameeyay Başakşehir İkitelli City Hospital cosbitaalka dhismaha wadada. Karaismailoğlu, ambalaaska ayaa laga samaynayaa albaabka waaxda gurmadka degdegga ah ee cusbitaalka iyo dhismaha wadooyinka dhinaceeda laga soo galo galbeedka. [More ...]
Tareenka Xawaare Sare leh, ee duulay Ankara-Konya 13kii Disember 2018 magaalada Ankara, wuxuu isku dhacay tareenka haga inta lagu gudajiray saldhigga Marşandiz. Shilka dhacay, 9 qof ayaa ku dhimatay mid ka mid ahna waa la hayaa. [More ...]
Saldhigga tareenka ee Adana ama Saldhigga tareenka ee Adana waa saldhigga tareenka ugu weyn ee TCDD oo ku yaal degmada Seyhan ee Adana. Idaacadda waxaa la hawl galiyay 1912. Maanta, waxay hoy u tahay 6-da Agaasime Gobol ee TCDD [More ...]
Qandaraaska xarunta cusub ee basaska, oo ka mid ah mashruucyada Duqa Magaalada Trabzon Metropolitan Duusaale Murat Zorluoğlu uu muhiimadda siinayo, ayaa la qorsheeyay in la bilaabo illaa dhammaadka May. Midda cusub ee buuxin doonta yaraanta weyn ee magaalada [More ...]
Iyadoo sii wadaysa dadaalkeeda ah inay siiso badbaado, raaxo iyo nadaafad nadiif ah dadka Eskişehir, Eskişehir Dawlada Hoose waxay sidoo kale fulisay howlaheedii nadaafadeed ee joogtada ahaa ee bandowga todobaadkan. Faafidda Corona [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay midabeeysaa marinnada lugeeyaha ee lugeeya, buundooyinka iyo derbiyada madhan ee magaalada caasimada ah iyadoo ay sixir taabanayaan rinjiyeyaasha. Iyada oo uu bilaabay mashruuca Duqa Magaalada Mansur Yavaş, rinjiyeyaasha ka socda caasimadda, [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya waxay u gudbaysaa nidaam jiil cusub oo ku saabsan nidaamka kahortaga jeermiska ka hortaga noocyada cusub ee coronavirus (Kovid-19) iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda KTO Karatay. Tusaale ahaan of Turkey, taas oo si loo ilaaliyo caafimaadka dadweynaha ee dagaalka ka dhanka ah Koronavirüsl [More ...]
Bandooga ayaa lagu dabaqay sabtiyada iyo axadda gudaheeda iyadoo la adeegsanayo la dagaallanka viruska Corona, Dowladda Hoose ee Magaalada, oo sii wadaysa dib u cusbooneysiinta asphalt waxay ka shaqeysaa halbowlaha ugu weyn ee Bursa, dhanka kale, dhinaca kale, waxay bixisaa adeegyada laga filayo xaafadaha muddo sanado ah. [More ...]
Saacadaha Duulimaadka Nidaamka Tareenka ayaa Lagu Fidiyay Magaalada Istanbul!
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa Isniintii shaacisay in canshuuraha cusub laga dhaqan galin doono qadka tareenka kadib bandowga. Khadadka loo yaqaan 'metro' iyo tareenka ayaa shaqeyn doona inta u dhexeysa 06:00 - 23:00. Khibrad u leh tirada rakaabka [More ...]
TransportationPark, mid ka mid ah laxiriirta Degmooyinka Kocaeli Magaalo Weyn, ayaa ku dhawaaqay in Akçaray ay abaabuli doonto duullimaad 11 daqiiqo ah waqtiga ugu sarreeya Isniinta, Meey 2020, 6, inta lagu guda jiro kala guurka habka caadiga ah. Akçaray waxay safri doontaa 7 xilli oo kala duwan, maalin [More ...]
Xayiraadaha safarka ayaa lagu soo rogay adduunka oo dhan sababtoo ah dillaaca cudurka corona. Sababtaas awgeed, tirada rakaabka ee garoonka diyaaradaha Istanbul waxay hoos ugu dhacday boqolkiiba 99,3. Maamulka Duulista Hawada ee Gobolka (DHMI) ayaa siidaysay tirakoobkeeda diyaaradaha ee bisha Abriil. [More ...]
Isaga oo ka hadlaya barnaamijka 'Madaxa ilaa Madaxa barnaamijka' ee uu soo agaasimey Jaamacadda Sakarya, Duqa Magaalada Ekrit Yüce wuxuu ka hadlay mashruuca Nostalgic Tram, kaasoo hindisadiisa dib loo dhigay sababta cudurka 'coronavirus'. [More ...]
Waa kuma Tomris Uyar?
Tomris Uyar, oo dhintey 17 sano ka hor oo naga tagay, ayaa mar kale lagu xasuustaa doodle. Halkan waxaa ah Tomris Uyar noloshiisa wuxuuna shaqeeyaa Tomris Uyar (Maarso 62 [More ...]
Kadib cudurka faafa ee coronavirus, hanaanka guud ee loo qorsheeyay in laga bilaabo aduunka iyo wadankeena waxay caadooyin cusub u keenaan bulshada. In kasta oo fogaanshaha bulshada iyo qawaaniinta nadaafadda ay weli muhiim u yihiin hannaanka caadiga ah, gaadiidleyda gaadiidka dadweynaha oo leh dhamaadka karantiil [More ...]
Maalgashiyadu hoos uma dhacayaan waaxda khibradda leh
Kaddib markii la caddeeyay heerarkii furitaanka xarun qiimayn iyada oo loo marayo qabanqaabada lagu sameeyay waaxda gawaarida la adeegsaday, shirkadaha qiimeeya, kuwaas oo dardar geliyay maalgashiyadoodii, ayaa sidoo kale bilaabay inay qaadaan tillaabooyin waaweyn oo ku aaddan dhisidda iyo sumcadda. Ganacsiga baabuurta la isticmaalay [More ...]
Taageero cusub oo Beeraha loogu talagalay Horumarinta Reer Miyiga ee 1,2 Bilyan Liras!
Wasiirka Beeraha iyo Dhirta Bekir Pakdemirli; “Waxaan sii wadaynaa inaan keenno taageerooyinka horumarineed ee miyiga ee IPARD maalgashadayaasha iyada oo ujeedadu tahay maalgashiyo badan oo laga sameeyo miyiga, dakhliya badan oo soosaarayaasha iyo wax ku biirinta shaqada. Markan [More ...]